トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Ona kubudikidza boka configuration pamusoro Horukon ari nepachinko yokumusoro
Shoko nepachinko neboka configuration, kazhinji kazhinji kuti ausingazivi Kana uri iwe mafaro nepachinko, haufaniri kuwana rubatsiro yako asi akati boka configuration pachayo haina chaizvoizvo. Sezvo pangava vanhu vazhinji kuti usaora kushandiswa kwazvo kunzwa, ticharamba zvishoma rondedzero yako. Nepachinko muchina zvakare, haashandi uye haripinduri magetsi. Nokuti chinangwa ichi, asi simba nerubatsiro kunodiwa, kazhinji musha uri 100 volts.
Zvisinei, nokuti simba nerubatsiro nepachinko muchina uri 24 volts, mukava kwakapa sezvazviri, zvichava utsi kuchabhururuka fiyuzi. Kuti kuita kudaro, unofanira transformer kutendeutsa voltage.
kuti chokuita chokuita uyu transformer, Ndinofarira chokwadi chokuti boka configuration. Boka configuration, pane mhando huru nhatu. Side-ne-divi configuration pakuguma nhamba configuration, ndiye pane mugari configuration. Kuziva boka configuration, hapana sarudzo asi kuchengeta.
anogona chete, ndinofunga kuti ipfungwa yakanaka kuti kuchengeta vakapinda chitsuwa zvinowanzooneka rova.
boka configuration, sezvo inogona subtracted yakarohwa pavanoparidza chete neboka nemumwe, sokuti zvokuti chiratidzo rinouya kubva horo conserver. The sei kuziva gotwe nhamba configuration, nyaya nhamba kuguma chikuva kuti ndiye raparadza guru ndiye nhamba, dzakanga mukana yomuduku nhamba configuration.
mon iri kure miniti, kuudza, zvinoita sokuti zvakaoma kunzwisisa uye haanyatsonzwisisi kuchengeta mukati nepachinko yaiitirwa. Zvadaro, ndiwo divi-ne-divi configuration, zviri nyore kunzwisisa zvokuti zvichienzaniswa kwezana configuration kuguma yapfuura. Kana
sei, nekuti kazhinji chinoitwa kubva mana divi-ne-divi mune mapoka mashanu, iwe jackpot kungangova kuitika parutivi. Arege kufamba, muchaona kana akataurwa pamusoro pachivara. Kana divi-ne-divi raparadza muna
parutivi vari dzichiitika, izvozvo kunowedzera mukana wokuti divi-ne-divi configuration. Nemamwe mashoko, nani pakuongorora petafura nhamba yakarova jackpot, worugotwe nhamba The zvakawanda Hits chete tafura, dzakanga mukana yomuduku nhamba configuration, kana nokurova muna
divi-ne-divi riri kurova dzichiitika ndiko, sokunge kuti pane mukuru mukana divi-ne-divi configuration. Pakupedzisira, ndiye mugari configuration, mugari configuration ndiye ndinofunga zvikuru rakaoma kutaurira.
chitsuwa pane nyaya kuva kana kuva pfupi kure, uye ane kwete chete boka, ndiye vanhu vakawanda havana hanya. Pakadaro, uye edza kuona chitsuwa raparadza iri pfungwa, zvingava nyore kunzwisisa.
pasina divi-ne-divi, kana hazvisi zvichida pamagumo configuration iri zvinhu zvakadai kuti pane mukuru wokuti kwemashifiti configuration. Ndinofunga kuti vanhu vane munoziva, kusanganisira chokwadi kuti pane zvinhu kuti boka configuration, asi, zvamazvirokwazvo, kwakadaro boka configuration haisi hakuna.
Boka configuration chikazozikamwa, kana Asobere agere chemwenje zvakafanana configuration, asi zvinonzi mukana ndibate raparadza anotevera riri kumusoro, muna boka configuration haisi pacharo chitoro, iri nzira usingagoni kushandiswa.
First, uye nepachinko parlors ainyatsotevedzera, zviri nani kuti yakadaro muitiro akatanga kuongorora nyaya yacho kubva pfungwa kana kuona. Akadaro boka configuration haisi hakuna.
First, uye nepachinko parlors ainyatsotevedzera, zviri nani kuti yakadaro muitiro akatanga kuongorora nyaya yacho kubva pfungwa kana kuona.